I-ZOROHome1 ★Atlan-City View Apart★ Danang Center - I-Airbnb
I-ZOROHome1 ★Atlan-City View Apart★ Danang Center
Thanh Khê, Đà Nẵng, i-Vietnam
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Thảo
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Thảo izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Hlola indlu yethu entsha ukuze uthole isaphulelo esihle:
https://www.airbnb.com/rooms/4/46826 Kutholakala ngendlela eqondile ukusuka esikhumulweni sezindiza ukuya e-MyKhe Beach, i-ZORO1 kulula ukuyifinyelela kusuka esikhumulweni sezindiza kodwa futhi eduze kwazo zonke izindawo zokuvakasha (ukuhamba ngezinyawo ukuya E-BIG C, e-Con market&Dragon Bridge). Isakhiwo esinezinga eliphakeme, ukubukeka okuhlaba umxhwele kwedolobha nomfula i-Han kungaphandle kwamafasitela akho. Inefenisha ephelele enezindawo zesimanje, le kondo engu-100 m2 inikeza isisekelo esihle kubantu abadala abangaba ngu-6 ukuba bahlole idolobha.
lingu-100 sqm elinamakamelo okulala angu-2 (imibhede engu-3), izindlu zokugezela ezingu-2, indawo evulekile yokuhlala ekhishini, nendawo yokuwasha izingubo.
★★Uhamba amaminithi angu-10 ukuya e-Big C, & Con Market, amaminithi angu-20 ehamba ngezinyawo ukuya e-Dragon Bridge.
★Wonke amakamelo anama-air conditioner + amafasitela amakhulu okwamukela ukukhanya nomoya.
★Igumbi lokuphumula elinosofa ontofontofo kanye ne-inthanethi ye-TV engu-48-inch ne-Netflix
Izinto zombhede ezinethezekile★ kakhulu ezinomatilasi namashidi ekhwalithi yehhotela.
★Ikhishi linakho konke okudingekayo, ukupheka kwamukelekile★.
Indawo ephakeme, ukubukeka okumangalisayo kwedolobha kanye noMfula i-Han.
ukufinyelela komiyane★ mahhala endaweni yokubhukuda esokhakhayini lwesakhiwo (evuliwe kusukela ngo-May kuze kube sekupheleni kuka-September) & indawo ye-bbq yangaphandle
Esezingeni Eliphezulu★ 24/7
Isipho★ sokwamukela (i-noodle+ikhofi + amanzi okuphuza)
~* ~ INDLU ~ * ~
Ifulethi le-Zoro libonisa isitayela sase-Scandinavia nawo wonke amakamelo anefasitela elikhulu lokwamukela umoya nokukhanya. Itholakala esitezi se-22 sesinye sebhilidi eliphakeme kunawo wonke edolobheni, IKHAYA le-Zoro likunikeza umbono omuhle wenkaba yedolobha ne-Han River kuwo wonke amakamelo. Ibhuloho le-Dragon kanye Nesondo Lelanga lingaphandle nje kwefasitela lakho. Ifulethi livulekile kakhulu. Indawo eyisikwele engu-100 ihlukaniswe ngamakamelo amabili okulala, izindlu zangasese ezingu-2, indawo yokuwasha eyi-1, nendawo eyodwa yokuhlala-indawo yokuhlala ye-kitchen. Umbhede owengeziwe ungahlelwa ekhoneni lokufunda ukuze abantu abadala abangu-6 baphumule kahle endlini. Ama-airconditioner ahlomele kuwo wonke amagumbi, kuhlanganise nendawo yokuhlala. I-super comfort sofa + 48 inches i-inthanethi TV NE-NETFLIX yokuzijabulisa kwasekhaya.
Ikhaya lethu lithandwa imindeni. Sinezinsana ezimbili ukuze leli fulethi liklanyelwe ukuba lilungele izingane. Asikho isitebhisi endlini. Wonke amafasitela, izitebhisi, ne-balcony zinezithiyo zokuphepha. Isihlalo esiphakeme, ubhavu wengane, amathoyizi ayatholakala (sicela usitshele kusengaphambili). Ikhishi lixhunywe endaweni yokuphumula ukuze ukwazi ukubeka iso ezinganeni zakho ngenkathi ulungiselela ukudla. Kukhona nendawo yokubhukuda yezingane esakhiweni (ngo-May kuya ku-September). Izimakethe zendawo, izimakethe ezinkulu, nezitolo ezifanelekile, izitolo zezingane ziseduze ukuze ukwazi ukuthenga ukudla nezinye izinto kalula.
~* ~ INDAWO
~ * ~ Leli fulethi lingesinye sezitaladi ezivelele kakhulu edolobheni. Ukusuka esakhiweni, kukuthatha izinyathelo ezimbalwa kuphela ukuya emigwaqweni ye-Nuyen Van Linh ne-Hung Vuong, imigwaqo ebaluleke kakhulu yokuhweba yedolobha lase-Danang. Itholakala endaweni ejabulisayo eseduze nezitolo eziningi zokudla zasendaweni, ungajabulela i-Danang njengomuntu wangempela wendawo! Ekuseni awusoze ube nenkinga yokuthola indawo enhle yokudla kwasekuseni nekhofi phakathi nemizuzu engu- uhamba ngezinyawo. Isitolo esitholakala kalula sisekamelweni elakhelwe ngaphansi. Uhambo olufushane lwamatekisi noma uhambo lwemizuzu engu- ~15 luzokuyisa ezindaweni eziningi ezithandwayo zokuvakasha edolobheni. Ibhishi lami lase-Khe liqhele ngemizuzu engu-10 ngetekisi noma ngithatha.
~* ~ ISEVISI ~ * ~
Sihlezi silapha ukusekela! Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi
I-NOODLE & ISIPHUZO SAMAHHALA: Uzofika sekwephuzile futhi zonke izitolo sezivaliwe? Ungakhathazeki, sikulungiselela i-noodle esheshayo ongayisebenzisa mahhala. IKHOFI nayo imahhala. Ikhala namanzi okuphuza ashisayo ahlale ekulungele.
ISEVISI YEZIMOTO: Sinesevisi YEMOTO eya e-Bana Hill, e-Hoi An, e-Hue, eNdodana yami nasemaphandleni edolobheni. Sinikeza izimoto zangasese zekhwalithi ephezulu, umshayeli okhuluma isiNgisi. faka UMLAYEZO UMA UNESITHAKAZELO ku-.
Ukushintshaniswa KWEMALI: Uma ungenaso isikhathi sokushintshanisa IMALI ngaphambi kokuza e-Vietnam? Sicela uxhumane nathi ngaphambi kokufika kwakho, futhi inani lemali oyidingayo lizokulungela lapho ungena.
~* ~ IMINININGWANE EYENGEZIWE
~ * ~ 1/Indawo
ye-Living-dining-kitchen Igumbi lokuphumula: Usofa ontofontofo kanye ne-TV engamayintshi angu-48, ne-Netflix, ekahle kakhulu ekuzijabuliseni kwasekhaya.
Indawo yokudlela: Sinezitsha ezinhle zetafula ukuze ulungiselele ukudla okugcwele kwabantu obathandayo.
Ikhishi: Ihlome ngokugcwele ngohhavini, i-microwave, ilayisi lokupheka, i-toaster, umshini wokwenza ikhofi nazo zonke ezinye izitsha zokupheka. Sikulungiselela izinongo eziyisisekelo ekhishini. Ukupheka kwamukelwa ngemfudumalo.
2/Ikhona lokufunda: Sinekhoneni lokufunda elineshalofu elikhulu lezincwadi kanye nefasitela elibheke idolobha. Ungathola izincwadi nemininingwane yezivakashi namakhuphoni lapha.
3/ Indlu yokugezela: Kunamagumbi okugezela amabili, elilodwa lixhunywe ekamelweni lokulala elikhulu. Enye ixhunywe endaweni yokuphumula. Igumbi lokugezela elilodwa linobhavu omkhulu onamanzi ashisayo. Enye indlu yokugezela inekhabethe elikhulu le-shower ukuze uligcine lihlukaniswe nendawo yangasese. Amathawula, i-shampoo, i-gel yomzimba, umuthi wokuxubha amazinyo, amabhulashi okuxubha amazinyo ahlale ekulungele emagumbi okugezela. Sikulungiselela imikhiqizo yekhwalithi ephezulu, njengoba nje sisebenzisa ekhaya.
4/ Amakamelo okulala: Ikamelo lokulala elikhulu linombhede omkhulu. Elinye ikamelo linombhede omkhulu. Omatilasi, imicamelo, nezingubo zokulala kuyindinganiso yehhotela. Ngisebenzisa kuphela amalineni ombhede ezintweni zekhwalithi ephezulu (i-Tencel, i-sateen kakotini kanye nokotini ohlotshisiwe). Sihlala sihlanza imigqa ngaphambi kokufika kwakho ngokugeza HHAYI NJE ukuyilungisa! Sifuna ukuqiniseka ukuthi ungalala ngokunethezeka ngemva kosuku olunzima lokuhlola idolobha. Ama-hairdryer, i-ayina, ibhodi loku-ayina, ama-Hanger ahlomele ekamelweni lokulala.
5/Indawo yokuwasha izingubo: Umshini wokuwasha ngensipho yokugeza ukhululekile ukuze uwusebenzise.
6/Indawo yokubhukuda nepaki langasese: Itholakala esitezi sesine sesakhiwo, indawo yokubhukuda iwuhlobo oluphezulu lophahla, mahhala ukuze isetshenziswe, isebenza kusukela ngo-May kuya ku-September. Ipaki lisesitezi sesine, liyatholakala endaweni yokosa ngaphandle (igcinwe kusengaphambili). Futhi, kunesitolo esilula sokuthenga ukudla neziphuzo esitezi sesine nesinye esisegumbini elingaphansi lesakhiwo.
7/Sinomshini wokukhipha amanzi ohlinzeka ngamanzi asebhodleleni angenamkhawulo wekhwalithi ephezulu. Asikho isidingo sokuthenga amabhodlela amanzi noma ubilise amanzi ukuze uwaphuze. Ikhofi kumahhala! Zikhonze futhi uzizwe usekhaya e-Zoro EKHAYA.
★ I-Danang Airport: imizuzu engu-5 ngetekisi
★ Ibhishi lami le-Khe: imizuzu engu-10
ngetekisi Imakethe yendawo ye-Con: uhambo lwemizuzu engu- ~10 noma imizuzu engu-3 ngetekisi
★ ★ Vinh Trung Plaza (Big C): ~ imizuzu engu-10 yokuhamba noma imizuzu engu-3
ngetekisi I-Phap Lam Pagoda: ukuhamba okungaphansi kwemizuzu engu-10.
★ ★ Umfula i-Han: uhambo lwemizuzu engu- ~ 19 noma imizuzu engu-5
ngetekisi I-Dragon Bridge: uhambo lwemizuzu engu- ~19 noma imizuzu engu-5 ngetekisi
★ ★Imnyuziyamu Yokuqoshwa kwe-Cham: uhambo lwemizuzu engu- ~19 noma imizuzu engu-5
ngetekisi Ithempeli le-Cao Dai: uhambo lwemizuzu engu- ~19 noma imizuzu engu-5 ngetekisi
★★I-Danang Cathedral: Ukuhamba imizuzu engu-25 noma
ama-7mins ngetekisi★ Imakethe ye-Han: Ukuhamba imizuzu engu-25 noma imizuzu engu-7 ngetekisi
Iziteshi zamatekisi nezamabhasi ziseduze. Siphinde sihlinzeke ngesevisi yezimoto ukuze ukwazi ukuvakashela i-Bana Hill, i-Hoi An, i-Hue ...kalula.
I-HDTV engu-48" ene- ikhebula ye-premium, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
IKHAYA le-Zoro litholakala enkabeni ye-Danang, imizuzu engu-5 nje ukusuka esikhumulweni sezindiza & ukuya e-Han River. Indawo ezungeze idolobha elikhulu igcwele izindawo zokudlela zokudla zasendaweni, izitolo zekhofi... ongazithola ohlwini ku-albhamu ye-Zoro, ukuze uthole ireferensi:
Xin chao!!! We are Thao & Hai. We are a lecturer & a civil engineer. We are in our 30s, love to see the world together and meeting new friends along the way. We were born…
Igama lami ngingu-Thao futhi igama lomyeni wami ngu-Hai.
Ukukhiya okuhlakaniphile kufakwe emnyango ngekhodi yezivakashi zokungena nokungena okuzimele.
Sihlezi sitholakala ku-inthanethi futhi sihlangane nawe uma kukhona okukukhathazayo.
Singathintwa ngocingo lwefoni noma i-FaceTime/WHATS APP/i-ZALO/i-Kao TALK/I-LINE/i-We CHAT/amanye ama-app nganoma isiphi isikhathi ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle.
Siye sahlala futhi sahambahamba e-Vietnam iminyaka eminingi. Singakunikeza imininingwane ephakathi kwezindawo ezinhle kakhulu nezindawo ezisedolobheni, izinto ongeke uzithole kunoma yiziphi iziqondiso zokuvakasha. Lezi zihlanganisa izindawo zokudlela, ama-bar, amakilabhu, ukuqasha amabhayisikili, ezemidlalo, ukuhamba ngomkhumbi, i-paragliding ngisho ne-spa. Kungakhathaliseki ukuthi yini oyithandayo, qiniseka ukuthi uzoyithola ohambweni lwakho!
1. NGAPHAMBI KOKUFIKA: Sizoxhumana nawe ngayo yonke imininingwane ukukusiza ungene kahle. Ukufundiswa Kwemininingwane yokungena kuzothunyelwa ngaphambi kokufika kwakho, okutholakala ngesiKorea nesiNgisi. Ungathumela izicelo ezikhethekile njengemibhede eyengeziwe yezindawo zezingane kusengaphambili. Kuyinjabulo yethu ukukwenza uzizwe usekhaya!
2. PHAKATHI NOKUHLALA KWAKHO: Sizobhekana nakho konke phakathi nokuhlala kwakho futhi sikusize uhlele uhambo lwakho e-Danang nasezindaweni ezizungezile (Hoi An UNESCO edolobheni lasendulo, e-Ba Na Hills, edolobheni lase-Hue, e-Cu Cu Cu Cham Island,..). Sizokunikeza ibalazwe lendawo ezungezile ukuze ukwazi ukuhambahamba.
Hlola ezinye izinketho ezise- Thanh Khê namaphethelo